Akeekkachiisa Warra Mirga Hin Tuqamnee Mootummaa Wayyaanee TPLF/EPEDF Irraa argatanii Olola Afaanfaajjii Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Ofuuf qabaa Nagadhiisa jechaa jiraniif. « QEERROO
Akeekkachiisa Warra Mirga Hin Tuqamnee Mootummaa Wayyaanee TPLF/EPEDF Irraa argatanii Olola Afaanfaajjii Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Ofuuf qabaa Nagadhiisa jechaa jiraniif.
October 20, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Warrii Mirga hin tuqamnee Wayyaanee irraa argattaan yeroo barbaaddanitti waan barbaaddan dubbachuuf abbaa barbaaddaan qeequufi olola afaanfajjii uumuuf marsaa mediafi social mediatti fayyaadamuun ergama keessan bahuuf naqabaa na gadhiisa jechaa jirtu. Namni uummata Oromoof qabsaa’uu icciitii qabsoo diinaaf banbansuu dhiisee afuura isaa uummata keessa dhokfatee uummata aragalfii tokko malee ijaaraa tokkummaafi walhubannoo jabeessaa, sabboonummaafi Oromuummaa jabeessaa, miira qabsoofnee ni moona jedhu guddisuun diinarratti hojjeta.
Akka keessaan kana na argaa na argaa hin jedhuu, na argaa na argaan keessan kun boru immoo na dhoksaa na dhoksaa akka ta’uu shakkiin hin jiru. Uummata keessaniif maaf dubbattuu miti dubbiin ijoon yaalii isin qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabarsuufi dhiigaafi lafee gootoota Oromoof naatoo dhabuun olola farreen qabsoo butattanii as bahuu keessanidha. Kun immoo qajeelfamaafi dirqama eenyurraa fudhattanii akka socho’aa jirtan ifatti saaxila.
Kaayyoon keessaan inni guddaan ABO balleessuu, Sochii warraaqsaa FXG Qeerroon Bilisummaa gaggeessa jiru ukkamsuu, Hidhamtootni Siyaasaa Oromoo akka hin hiikamne dura dhaabbatuudha. Sababaan isaa yoo hiikkaman dirreen isinitti waan dhiphatuufidha. Gama biraatiin hawwannaan qabsoo bilisummaa Oromoo Ilmaan Oromoo OPDO keessa jiranif godhaa jiruufi Sosochiin ilmaan Oromoo Sabboonoon OPDO keessa jiran waanjoo gabrummaa jalaa akka uummatni keenyaa bahuuf tumsa argisiisa jiran keessattuu kan poolisoota Oromiyaa dahoo godhattani waanuma ofii ijaartanii as baastan fakkeessuuf dhamaatu. Garuu dhugaan jiru jijjiramni jiru hunduu qabsoodhaan dhiigaaf lafeedhaan as bahe. Isin garuu wareegama uummata Oromoo fi gootota Oromoo bishanitti naquuf haasaawaa diinaa Summii siyaasaa heddummeessa jirtu. Kun immoo dirqamaafi hoggansa eenyuutiin akka socho’aa jirtan nama dhugaan saba isaaf qabsaa’u, Qabsoofi siyaasa beekuuf ifaadha. Ilmaan Oromoo hanga keessan kana utuu hin dubbatiin Oromummaan yakkamanii mana hidhaa keessa gidirfamaa jiru. Hanga keessan gadi bahanii carraan media kennameefi hin beeku, caalatti immoo toftan qabsoo akkasiin dhufu tokkollee hin jiru. Arraba dheerachuurra yaada dheerachuu wayya. Isin gaafa barbaaddan waan barbaaddan yoo dubbattan iyyuu namni isin tuqu hin jiru, carraa mirga hin tuqamnee tika wayyaanee irraa waan argattaniif waan barbaaddan haasawuuf carraa argattani jirtu, dhiigaafi lafee ilmaan Oromoo irraa dhaabbattanii warrii gooftoolii keessan abdattanii doggoggora seenaa dhalchaa jirtan utuu waan laaqaa jirtan kana dhiiftanii isiniif wayyaa.
Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef kabajaa guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuun uummata keenya bilisa baasuufi biyyaa keenya walaba baasuuf kaanee jirra.
« SQ: Sagale Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Onkoloolessa 19, 2017
ኦሮምያ ውስጥ የተቀጣጠለውን ሕዝባዊ ተቃውሞ አስመልክቶ ከቄሮ ብልሱማ ዓለም ዓቀፍ ድጋፍ አስባሳብ ም/ቦርድ ስብሳብ ጋር የተደረግ ውይይት ================== »